लसुन खेती गर्ने तरिका
फागुण ९, २०७५ | 21st February, 2019
7450 पटक पढिएको
धेरै मानिसहरू लसुनको गन्धको कारण र यसको कडा स्वाद मनपराउँदैनन्। तर यो कुरा गलत हो । लसुन गुणहरू को एक भण्डार हो। यसमा एन्टी- अक्साइड गुणहरू छन् जुन हाम्रो पेटको लागि सबैभन्दा आवश्यक र लाभकारी हुन्छ। यदि हामी बिहानको खाली पेट यसको उपयोग गर्छौं भने, हामी कहिल्यै पेटसँगको कुनै समस्यामा पर्दैनौ । जस्तै, बवासीर, कब्ज, ईश्वर, रक्तचाप, भूख वृद्धि गर्न यसको प्रयोग गरिन्छ। लसुनले महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक एन्टिबायोटिक जस्तै काम गर्दछ। लसुन खेती गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु यस प्रकार छन् :
लसुन(Garlic)को प्रयोग कसरी गरिन्छ ?
लसुन विशेष गरी मसला बालीकै रुपमा प्रयोग गरिन्छ । तरकारी, अचार, चटनी, मासुको स्वाद बढाउन लसुनको प्रयोग हुन्छ । विदेश तिर यसको सुख्खा धुलो बनाएर प्रयोग गर्ने प्रचलन बढी रहेको छ । नेपालमा पनि चाउचाउ उद्योगमा लसुनको तेल प्रयोग भएको पाईन्छ । स्वादिष्ट परिकार मःम को मुख्य मसलानै लसुन हो ।
लसुनमा कुन-कुन पौष्टिक तत्वहरु पाईन्छ ?
लसुन पौष्टिकताको हकमा सबै गानो बाली मध्ये लसुन बढी पौष्टिक छ । यो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फसफोरस, एसकरबिक एसिडको राम्रो श्रोत हो ।
लसुनको औषधिय गुण के-के हुन ?
लसुन एक औषधीय वाली हो । जैविक खेती प्रणालीमा खेतीको बीचबीचमा लसुन लगाउनाले किराहरु भाग्छन भनिन्छ । लसुनका १–३ केस्रा खाली पेटमा पानी सँग खाँदा जोर्नीहरु दुख्ने रोगमा फाइदा पुग्दछ । यसले रगतमा बढेको कालेस्ट्रोल ट्राइग्लिसराइडलाई पनि समान्य गराउँदछ । ५० ग्राम जति तोरीको तेलमा ४–५ लसुनको केस्रा फुराएर डढाएर एउटा भाँडोमा राखी आवश्यकता अनुसार ढाड, कम्मर, वा अन्य दुखेको भागमा प्रयोग गर्दा विशेष लाभ हुन्छ।
लसुन खेतीको लागी कस्तो हावापानी चाहिन्छ ?
लसुन एक फराकिलो हावापानी अर्थात तराई देखि उच्च पहाड सम्म खेती गर्न सकिने वाली हो । गानो बन्नका लागि लामो दिन र उच्च तापक्रम (विरुवा बढने भन्दा) चाहिन्छ ।
लसुन वालीको लागि चाहनिे तापक्रम कति हो ?
लसुनको गानो बन्नका लागि २५–३० डि.से. तापक्रम उपयुक्त हुन्छ । १०–१५ डि. से. मा बानस्पतिक बृद्धि हुन्छ , त्यस्तै तापक्रम २० डि.से.भन्दा माथि लागेपछि गानोको विकास शुरु हुन्छ ।
लसुन तराईमा कहिले रोप्नु पर्छ ?
लसुन तराईमा असोज १५ देखि कार्तिक १५ सम्म रोप्न सकिन्छ।
लसुन मध्य पहाडमा कहिले रोप्नु पर्छ ?
लसुन मध्य पहाडमा कार्तिक महिना भर रोप्न सकिन्छ ।
लसुन उच्च पहाडमा कहिले देखि रोप्नु पर्छ ?
लसुन उच्च पहाडमा साउन-भदौंमा रोप्न सकिन्छ ।
लसुन खेतीको लागि प्रकास अवधि कति चाहिन्छ ?
लसुनको गानोको सुरुवात, वृद्धि विकासका लागी प्रकाश अवधि १२ घण्टा वा सो भन्दा बढी हुन आवश्यक छ।
लसुन खेतीको लागि के रोप्नुपर्छ ?
लसुन वानस्पतिक प्रसारण गरिने मसला वाली हो । लसुनको केस्रा (Clove) वाट नै प्रसारण गरिन्छ । अतः रोगकम लाग्ने स्वस्थ्य ठूला, आकर्षक गानाको बोटमै छनौट गरि बीउको लागी भण्डारण गर्नु पर्दछ । तर ख्याल गर्नु पर्ने कहिले पनि उच्च पहाडबाट ल्याएको लसुन तराईमा लगाउनु हुँदैन । भोटे टाइपका लसुनको पनि तराईमा गानो लाग्दैन ।
लसुन खेतीको लागि कस्तो माटो चाहिन्छ ?
लसुनका लागी पानी नजम्ने खुकुलो माटो उत्तम हुन्छ । प्राङ्गारिक पदार्थ प्रशस्त भएको ६–७ पि.एच. भएको माटो राम्रो हुन्छ ।
लसुन खेतीको लागि आवश्यक पर्ने मल के कती हो ?
लसुनलाई प्राङगारिक मल प्रशस्त चाहिने भएकोले ३० टन राम्ररी पाकेको गोठे वा कम्पोष्ट मल प्रति हेक्टर जमिन तयार गर्नु अधि प्रयोग गरी खनजोत गर्नु पर्दछ । रसायनीक मलको हकमा प्रति हेक्टर १२०: ८०:८० के.जी.नाइट्रोजन, फसफोरस र पोटास सिफारिस गरिएको छ ।
लसुन खेतीको लागी के कती कसरी मल प्रयोग गर्नु पर्छ ?
लसुन खेतीको लागी ५.६ के.जी. युरिया, ८.७. के.जी. डी.ए.पी. र ६.७५ के.जी. म्युरेट अफ पोटास प्रति रोपनी जग्गा तयारीको अन्तिम वेला प्रयोग गरिन्छ भने ४ के.जी. युरिया २/२ के.जी.का दरले रोपेको ३० दिन र ६० दिन पछि प्रयोग गर्नुपर्दछ ।
लसुन कतीको दुरीमा रोप्नु पर्छ ?
लसुन १०–१५ से.मी को दुरीमा रोप्नु पर्छ।
लसुन रोप्न के कती बीउ (केस्रा) चाहिन्छ ?
लसुन रोप्न बीउ (केस्रा) ५००–६०० के.जी. प्रति हेक्टर (२५ देखि ३० के.जी. प्रति रोपनी ) आवश्यक पर्छ।
लसुन खेतीमा सिंचाई कहिले गर्नु पर्छ ?
लसुनले पानी जमेको र सुख्खा दुबै सहन सक्दैन । साधारण चिस्यान गानो तयार नहुन्जेल चाहिन्छ ।
लसुनमा गोडमेल कहिले गर्नु पर्छ ?
लसुनको पहिलो गोडाई लगाएको २५-३० दिन पछि र दोश्रो गोडाई ५०-६० दिन पछि गर्नु पर्छ ।
लसुन कहिले खन्नु पर्छ ?
लसुनको गानो तयार भएपछि लसुनको बोट पहेंलिई भुईमा ढल्न थाले पछि खन्नु पर्छ ।
लसुनको क्यूरिङ्ग कसरी गर्ने ?
लसुन खने पछि खेतमै गानालाई बोटले छोपी सुकाई सम्पूर्ण बोट सुकेपछि छाया र हावामा राम्ररी सुकाई थन्काउनाले भण्डारणमा राम्रो हुन्छ ।
ओली सरकारको १ वर्ष : अनगिन्ती काण्डै काण्ड
विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासको लागि द ह्वाइट माउन्टेन स्कुलको प्रतिबद्धता
हेर्दाको डाल देशको राजधनी, ढिडोको काल काठमाडौँ
ट्रक दुर्घटनामा : दुईको मृत्यु
कुसुम–हापुरे १३२ केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा
‘कमाण्ड एण्ड स्टाफ कोर्ष’ पूरा गर्नेलाई प्रमाणपत्र
च्यासल युथ क्लव सेमिफाइनलमा
महिला फुटबल टोली चयन
डिपिएल : महेन्द्रनगर क्वालिफायर्समा प्रवेश